Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Mareykanka ayaa ka digay dhamaan safarada Ruushka
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Xuquuqda Aadanaha • Waajib ah • Wararka Ruushka • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Talabixin cusub oo socdaal Mareykan ah, oo la soo saaray Isniinta, ayaa siineysa Ruushka kala soocista halista ah sida Afghanistan, Uganda iyo Syria.
Muwaadiniinta Mareykanka ayaa looga digay inay u safraan Ruushka xaalad kasta oo jirta
Mareykanku wuxuu si gaar ah ugala talinayaa booqashooyinka gobollada koonfureed ee Ruushka sida Chechnya iyo Crimea oo lagu muransan yahay.
Saraakiisha Mareykanka ayaa ka taxadaraya safarka sababo la xiriira "dhibaateynta saraakiisha amniga ee dowladda Ruushka".
The Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Mareykanka ayaa kula talisay muwaadiniinta Mareykanka inay ka fogaadaan u safridda Ruushka xaalad kasta oo ay ku sugan tahay, iyadoo ka digtay in dadka Mareykanka ah la afduubi karo, la xiri karo, la ciqaabi karo lana xiri karo arrimo been abuur ah.
Talabixin cusub oo socdaal Mareykan ah, oo la soo saaray Isniinta, ayaa siineysa Ruushka kala soocista halista ah sida Afghanistan, Uganda iyo Syria Sidoo kale iyadoo si gaar ah looga waaninayo booqashooyinka lagu tagayo gobollada koonfureed ee Ruushka sida Chechnya iyo Crimea ee lagu muransan yahay, muwaadiniinta Mareykanka ayaa hadda loo sheegayaa inay ka fogaadaan gebi ahaanba Ruushka.
Bayaanka ayaa lagu xusay "argagixisada" inay tahay hal sabab oo dalxiisayaasha Mareykanka ay uga fogaadaan Ruushka.
Intaas waxaa sii dheer, saraakiisha Mareykanka waxay ka taxadaraan safarka sababo la xiriira "dhibaateynta saraakiisha amniga ee dowladda Ruushka" iyo "sharci darrada sharciga deegaanka." Saraakiisha ayaa ka digaya in "eedeymo been abuur ah" lagu soo oogay dadka Mareykanka ah, iyo in shaqaalaha diinta, iyo sidoo kale shaqaalaha dowladda ay qatar ku jiraan.
Isla mar ahaantaana, la-talinta socdaalka ee cusub ee Washington waxay xustay awooddeeda xadidan ee ay ku bixin karto taageerada muwaaddiniinta Mareykanka safaaradda ay ku leedahay Moscow. Bishii Abriil, ergada diblomaasiyadeed waxay ku dhawaaqday inay yareyneyso tirada shaqaalaheeda ku dhowaad 75% ka dib markii ay ka mamnuuceen Ruushka inay shaqaaleysiiyaan dadka maxalliga ah qeyb ka mid ah wareegtada uu saxiixay Putin ee ka jawaabaya "ficillada aan saaxiibtinimada lahayn," xeerarka ay soo rogtay Washington.
Sidaas darteed, safaaradda Mareykanka ee Ruushka wixii hadda ka dambeeya “ma bixin doonto adeegyo caadi ah oo nootaayo ah, Warbixinno Qunsuliyadeed oo Dhalasho Dibadda ah, ama cusbooneysiin adeegyo baasaboor mustaqbalka dhow,” ayay wakiiladoodu sheegeen. 2018, Mareykanku wuxuu xiray qunsuliyadiisa St Petersburg, bishii Diseembar ee sanadkii hore, wuxuu xiray xafiisyadiisa magaalada Ural ee Ekaterinburg iyo caasimada fog ee Vladivostok. Go'aanka, oo Washington ay sheegtay inuu ku yimid qayb ka mid ah muranka ka taagan matalaadda diblomaasiyadeed, ayaa Mareykanka uga tagay iyadoo aan wakiil wakiil diblomaasiyadeed ku lahayn Ruushka meel ka baxsan Moscow.